चक्रपथ विस्तारको दोस्रो खण्डः ‘साइट क्लेरेन्स’ले पाएन् पुर्णता, कहिले सम्पन्न होला सडक ? - नेपालबहस
चक्रपथ विस्तारको दोस्रो खण्डः ‘साइट क्लेरेन्स’ले पाएन् पुर्णता, कहिले सम्पन्न होला सडक ?
११ फागुण २०७७ | १५:५५:२४ मा प्रकाशित
११ फागुन,काठमाडौं । कलङ्की–धोबीखोला सडक विस्तारका लागि निर्माणस्थल खाली गर्ने काम दुई प्रतिशत बाँकी रहेको छ । चीन सरकारको सहयोगमा विस्तार गरिने सो सडकमा पर्ने महाराजगञ्ज क्षेत्रमा पर्ने केही घरका कारण निर्माणस्थल पूरै खाली भइनसकेको हो ।
ती घरको मुआब्जाका विषयमा छलफल भइरहेको काठमाडौँ चक्रपथ सुधार योजनाले जनाएको छ । योजनाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय र काठमाडौँ महानगरपालिका लगायतका निकायसँग छलफल गरिरहेको योजनाका प्रमुख अर्जुन सुवालले जानकारी दिएका छन् । उनका अनुसार त्यहाँ रहेका घरमध्ये सात घरको शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागबाट क्षतिपूर्तिको मूल्याङ्कन प्राप्त भएको छ । उनले भने, “मूल्याङ्कन भइसकेको घरको प्रक्रिया अघि बढाइनेछ ।”
तीमध्ये १२ घरको घरधनीसँग सम्पर्क हुन नसकेको बताइएको छ । वडा कार्यालयले ती घरधनीसँग सम्पर्क गर्न खोजे पनि नसकेको उनको भनाइ छ । वडाध्यक्षले सम्पर्क गर्दा कतिपय व्यक्ति विदेशमा रहेकाले पनि सम्पर्क हुन नसकेको हो । घरहरु चीन सरकारले निर्माण गर्ने आठ लेनभित्रै भएकाले निर्माण अघि बढाउन समस्या हुने उनले जानकारी दिए । ती घरहरुमा नक्सा लिएर मूल्याङ्कन गर्ने कि भन्ने छलफल भएको छ । कतिपय घर नक्साभन्दा फरक हुनसक्ने भएकाले त्यहीँ जाँदा मात्रै सही कुरा आउने उनले बताए ।
जम्मा ११ दशमलव छ किमी लम्बाइको सडकमध्ये २४४ मिटरमा निर्माणस्थल खाली गराउन नसकिएको योजनाले जनाएको छ । अरू कतिपय संरचना हटाइरहेको भए पनि त्यसले चिनियाँ टोलीलाई निर्माण अघि बढाउन बाधा नपुग्ने प्रमुख सुवालले बताए । सो सडकमा विद्युत् प्राधिकरणले तार जमीनमुनि राख्ने काम गरिरहेकामा त्यो मुख्य सडकबाहेकको सहायक सडकमा पर्छ । प्राधिकरणले तार सार्ने काम गत वर्षबाटै शुरुआत गरेको थियो । बाँकी स्थानमा पनि ठेक्का सम्झौता भइसकेको छ ।
निर्माणाधीन चक्रपथ : बजेटका विषयमा चिन्ता नगर्न अर्थमन्त्रीकाे आग्रह २ महिना पहिले
चक्रपथ दोस्रो खण्ड विस्तारः संरचना हटाउने काम ९७ प्रतिशत सकियाे ३ महिना पहिले
दुई बर्षदेखि कोटेश्वर–कलङ्की सडकका तीन पुल अलपत्र ३ महिना पहिले
चाँडै चक्रपथ दोस्रो चरणको विस्तारका लागि बाँकी संरचना हटाइने ५ महिना पहिले
दुई वर्ष बित्दासमेत कोटेश्वर–कलङ्कीमा अझै बनेन ‘सर्भिस ट्याक’ ५ महिना पहिले
सांसदहरुले तीन महिनाको तलब एकैचोटी पाउने १८ मिनेट पहिले
निःशुल्क बाख्रा पाएपछि बिपन्न परिवारमा खुशीयाली ६ घण्टा पहिले
कुहिएको अवस्थामा महिलाको शव फेला ८ घण्टा पहिले
प्रचण्ड-नेपाल समुह कांग्रेससँग मिलेर जाने १ दिन पहिले
बक्राहा नदीमा तटबन्ध बनेपछि स्थानीयबासीमा खुशी २ दिन पहिले
महिला लघुवित्तको आईपीओ शुक्रबार बाँडफाँड गरिने २ दिन पहिले
रामकृष्ण ढकाललाई सानुको याद आयो १ दिन पहिले
दश महिनादेखि श्रीलङ्काका कारागारमा २६ नेपाली महिला ७ घण्टा पहिले
‘धुर्मुस–सुन्तली फाउण्डेसन’लाई सगरमाथा इन्जिनीयरिङ कलेजको सहयोग १ दिन पहिले
दाहाल नेपालको विरोधसभाले आम नागरिकलाई सास्ती २ हप्ता पहिले
अदालतले संविधानबमोजिम नै फैसला सुनाउने पौडेलको जिकिर ३ हप्ता पहिले
नबिल बैंकको सञ्चालकमा उदयकृष्ण उपाध्याय नियुक्त २ दिन पहिले
दीपिकासँग मुम्बइका रोहितले रोमान्स गर्ने २ हप्ता पहिले
कोरोना संक्रमित प्रभु बैंकका एक कर्मचारीको जागिर गुम्यो १ महिना पहिले
दक्षिण कोरियामा रेमडेसिभर औषधिको प्रयोगमा अनुमति ९ महिना पहिले
एसईईको परीक्षाफल सार्वजनिक, यसरी थाहा पाउनुस नतिजा ! ६ महिना पहिले
कोरोना सङ्क्रमण न्यूनीकरण गर्न छर्किइयो कीटनाशक औषधि ११ महिना पहिले